12 Mazano Ekushandisa Paunenge Uchinzwa Kushatirwa - Pfungwa
Vanhu vanowanzo tsanangura kutsamwa semhute tsvuku inodzika pamusoro pemeso ako. Kana chidzitiro changodzika, haugone kuona chero chinhu zvakajeka uye unowanzoita zvisingaite zvachose.
Kwandiri, kunzwa kushatirwa ndeye toni pasi vhezheni yeiyo.
Ini ndinowanzo funga nezve mhute inoshatirwa serudzi rwekupenya pink, isina kusimba vhezheni haina kukwana kukanganisa maonero ako zvachose, asi zvakakwana kuti zvikuomere kutaura chero munhu zvakajairika kana kuzvibata zvine mutsigo.
Dzimwe nguva, iwe unogona kuve wakadzika mukati maro matope zvekuti hautombozviziva iwe uri mune yakashata mamood kana kuzvibata zvinoshamisa.
Nekudaro, kunyangwe iwe vari kunyatsoziva kuti urikuona zvinhu kuburikidza nechidzitiro chekutsamwa uye hausi kuita senge wako wakajairika, unonzwisisa wega, hazviite kuti zvive nyore kuizunza.
Hunhu hwevanhu kutsamwa nguva nenguva, uye tese tine mhosva nazvo. Kune ese marudzi ezvikonzero zvekuti isu tinokwanisa kutanga kunzwa kushatirwa uye isu kazhinji hatigone kufanotaura kuti zvichatora nguvai.
Dzimwe nguva tinomuka nenzira iyoyo, nepo dzimwe nguva zvichizouya zvishoma nezvishoma pamusoro pedu sezvinhu zvinoita sezvisingakoshi zvese zvinoita murwi nekutikurira.
Dzimwe nguva, chimwe chiitiko chakasarudzika kana kusangana nemumwe munhu anogona ipapo ipapo kushandura mamiriro ezuva ave ane gore.
Ndicho chikonzero nei zvakakosha kutanga wabvunza:
Zvikonzero zviviri zvikuru zvatinogona kunzwa kushatirwa ndezvekuti kana taneta kana kunzwa nzara. Ini handizive nezvako, asi kana ndisina kunge ndiine maawa masere azere kana kuenda anopfuura maawa mana ndisina kudya, handisi kunyanya kunakidzwa kuve padhuze.
Hangover inogona kundiita ndakatsamwa kushatirwa futi, kunyanya sekuziva kwangu zvizere kuzviparira.
Kushungurudzika kunogona kuve chimwe chinhu chikuru chinopa chikonzero. Kana iwe uine zvinhu zvine mamirioni zvinomhanyisa zvakapoteredzwa mukati meuropi hwako, zvinogona kuve zvakaoma kuramba uchishivirira kana kuti kuvapo zvechokwadi munguva .
mukomana wangu anonetsa nefoni yake
Paunenge uine huremu hwenyika pamafudzi ako, zviri nyore kuti ufare neavo vakakukomberedza.
Chekupedzisira, kuve mune imwe mamiriro ezvinhu kana kutenderedza vamwe vanhu kunogona zvakare kukonzera kusagadzikana. E-mail kana chinyorwa zvinogona kuzviita, kana kushomeka kweimwe wawanga uchitarisira.
Kutaurwa kunoitwa newaunoshanda naye kana mudiwa, mwana ane stroppy ane hasha dzekutsamwa kwavo, achifanira kubhadharira bhiri risingatarisirwi, kana kupotsa chitima chako, kunyangwe kana kunonoka kuri kushoma, kunogona kupa muyero wemanzwiro ako.
Asi ngatizvitarisei, kutsamwa hakuna kumbobatsira chero munhu.
Kana isu tiri kuona zvinhu kuburikidza neiyo pink mhute, zvakaoma kuwana chero chinhu chinovaka. Zvese zvatinowanzopedzisira taita kutsamwisa munhu wese akatikomberedza . Kuva nehasha kunogona kuwedzera njodzi yekukakavara uye zvinoreva kuti tinorasikirwa nezvinhu.
Dai chete paive nenzira yekubuda mairi…
Neraki, kunyangwe zvisiri zvese izvi zvichashandira munhu wese, isu takaona mashoma akaedzwa uye akaedzwa nzira dzekusununguka kubva kune inogumbuka pfungwa uye kudzoka kune yako yakajairwa wega.
Kunyangwe kana kusashanda kwavo kunoenderana nezvakakuita kuti ugumbuke pakutanga. Hatigone kuvimbisa kuti chero cheizvi chichaita zvemashiripiti kusimudza manzwiro ako, asi kana iwe ukawana hunyengeri hwekuzvidzorera pane zvakajairwa, iwe unonditenda nezvazvo.
… Sekuziva kwangu kuchaita mhuri yako, shamwari, uye vaunoshanda navo.
1. Tora A Nap
Chekutanga zvinhu kutanga, inguva yekuita chokwadi chekuti zvako zvakakosha zvevanhu zvakavharwa.
Mhepo yako yazvino ingave nechokuita nehusiku husina kurara hwawaive nahwo? Wanga wave kupisa mwenje kumagumo ese?
Ndinoonga kuti kubata nekukurumidza maminetsi makumi maviri ekuvhara-ziso kunogona kunge kusiri sarudzo inoshanda kana iwe uri pahofisi, asi kana iwe uchikwanisa kusveta kuenda kunorara nesimba, ita shuwa kuti unodaro.
Namatira kune kurara kwemagetsi pane kuzvibvumira kurara kwemaawa mashoma nekuti, sekuziva kwangu iwe, kana iwe ukarara kwenguva refu masikati, kazhinji unomuka uchinzwa kugunun'una uye pamwe uri mukuipa kwakanyanya kupfuura pawakaenda kurara.
Kurara nekukurumidza kunogona kukupa iwe simba raunoda kuti uenderere mberi nezuva rako uchinge wabvisa kusagadzikana kwako.
2. Iva Nekurumwa Kuti Udye
Basic inoda nhamba yechipiri. Izvi zviri nyore kuita paunenge uri muhofisi.
Kunyangwe iwe ungasadaro funga une nzara, kana iwe uri mune yakashatirwa mweya, zviitire iwe nyasha uye nekudya kana nekukurumidza tudyo uye uone kana izvozvo zvichinyengera.
Ini kazhinji handizive kuti ndanga ndakapfupika uye ndisiri kupfura pama cylinders ese kusvikira mumwe munhu andipa chikafu uye ndadzokera kupasi.
Edza kusaenda kune chero chinhu chiri zvese zvinokurumidza-kuburitsa mashuga, hazvo, sezvo iwe uchingo kwidza uye wozokurumidza muchimwiro zvakare.
Kana ndataura izvozvo, dzimwe nguva hapana chinhu chiri nani kune yakashata mamiriro pane chokoreti bhawa, uye kana iwe uine chishuwo chechimwe chinhu, ingozvigutsa. Kuzvinyima chikafu chaunonyatsoda kuchangoita kuti unzwe kushatirwa.
3. Pedza Imwe Nguva Uri Pachezvako
Izvi ndezvechokwadi kunyanya kana uri mutauriri wechisikigo , asi chero munhu arikunzwa kusvotwa anogona kuita pamwe nekanguva kega.
Neuchenjeri bvisa pachako kubva kune vamwe vanhu uye shandisa imwe nguva kungoita wega.
Unogona kungoenda nemaminiti mashanu kufamba uchikomberedza chivharo kana kapu inokurumidza yetii, kana iwe ungangozvigona kuzvibata wega manheru ese kwauri, zvirinani uine bhati uye nechikafu chakanaka.
Iwe unozopa pfungwa dzako mukana wekunonoka uye, kunyangwe kana iwe usingakwanise kuzunza kushatirwa kwako, zvirinani kuti haugumbure mumwe munhu kana kutaura chero chinhu chauchademba.
12 Zvikonzero Zvauri Kunzwa Saka Emotional Munguva Pfupi (Izvo Zvausingafanire Kuregeredza)
Maitiro Ekurega Kurega Kutsamwa: Iwo Matanho manomwe Kubva kuRage Kusunungura
Vanhu Vakadzikama Vagadzikana Vanoita Izvi Zvinomwe Zvinhu Zvakasiyana
Nzira Nhanhatu dzeKusvika paMumwe Wako Anogadzikana Maitiro Anochinja
Maitiro Ekudzora Kwako Manzwiro Mune Mamiriro Anodaidzira Kune Akanaka Musoro
4. Dzinga Kubva Pafoni Yako
Ipo iwe uchinge uine manheru wega uye uchizvisimbisa wega, chekupedzisira chaunoda kugara uchigamuchira magwaro uye maemail, kunyanya kana iri yako nhanho nhanho uye refu-yekuita rondedzero iri kukuisa iwe pamucheto.
Yedu yemazuva ano mamiriro ekuramba achibatana zvinoreva kuti hatimbove nemukana wekudzima. Tichiri kungogamuchira maemail ebasa na9pm husiku.
Paunenge uchiedza kuburitsa kunze kwemanzwiro, kushandura ndege nzira kunogona kubatsira zvakanyanya kuti usapinda munjodzi yekuerekana wagamuchira email iyo inokutsamwisa iwe zvakanyanya.
Siya foni yako mune imwe kamuri kwechinguva uye zvinogona kukubatsira iwe kunzwa sekunge imwe huremu hwasimudzwa kwechinguva.
5. Bvisa icho pachifuva chako
Ipo ini ndichigara ndichikurudzira ndega nguva yeavo vanonzwa kushatirwa, zvinogona zvakare kuve zvakanaka kuburitsa.
jeffree nyeredzi zvizoro zvakavanzika bhokisi
Chero chii chine zvakakonzera iwe , kuchema kune mumwe munhu waunoziva kuti achateerera achinzwira tsitsi kunogona kukubatsira kutaura kushushikana kwako wozozviisa kumashure kwako.
Edza kutaura nemumwe wako, nhengo yemhuri, kana sahwira . Sarudza mumwe munhu anokuda uye anozopa rutsigiro, mazwi emutsa, uye, kana iwe uchikumbira icho, an pfungwa yakatendeseka .
6. Ipapo Ban Banogunun'una
Rant pamusoro. Paunenge uchinge wakurukura dambudziko nemumwe munhu uye ukaratidza kusagadzikana kwako, usaramba uchidzokera kwariri nekugara pariri.
Zvidzivirire pachako kubva mukunyunyuta nezvazvo, kana nezve chero chinhu chipi zvacho cheicho chinhu.
Kudzokorora kugunun'una pamusoro pemamiriro ezvinhu hakusi kuvaka, sezvo kuchizochengeta kutarisisa kwako pairi. Kuti umise kunzwa kushatirwa, unofanirwa kukwanisa kurega kufunga nezvazvo.
Regedza kutora hupenyu zvakanyanya zvakanyanya . Tarisa katsi vhidhiyo. Verenga chinyorwa chinonakidza. Ridza shamwari ine mushe kwazvo.
Zvakaoma kudzorera huso kumeso kwako kana giggle ratsemura dombo rako rekunze.
8. Ita Kumwe Kuekisesaiza
Sezvaungave iwe uchiziva, kurovedza muviri kunotungamira mukuburitswa kwedopamine muuropi hwako. Iyi hormone inofara inongowedzera mafungiro ako.
Kana iwe uri mupfupi nenguva, kunyangwe kufamba nekukurumidza kuenda kuzvitoro nekudzoka (kune iyo tudyo yatakambotaura kare!) Inogona kubatsira kupuruzira cobwebs kure.
Kana iwe uchikwanisa kupukunyuka, musangano wekurovedza muviri kana kumhanya kunowana kupomba kweropa rako uye kunofanira kubatsira kudzosera kunyemwerera pachiso chako.
9. Kumbira Kumbundirana
Ganda kuganda kusangana ndeimwe nzira huru yekuwana dopamine rova. Kumbira mumwe munhu waunoda zvakanaka kwazvo kana vasingafarire kukumbundira kuti unzwe zviri nani.
Sei james charles achirasikirwa nevanyori
Vanozonyanya kusarudza kuti kuve newe unovabaya, uye zvinogona kunge zviri izvo zvaunoda kuzorora.
10. Tora Pfungwa Kuputsa
Wakamboedza kufungisisa here?
Kunyangwe zvingave zvisingakwanisike kudurura pfungwa dzako pane zvese kufunga kana iwe wakatsamwa (zvakaoma zvakakwana kana iwe uchinzwa kudzikama!), Kufungisisa kunokutendera kuti uone pfungwa dzinouya mundangariro uye kutsauka uchiyambuka kuziva kwako, pamberi pako dzosa tarisiro yako kumhepo yako kana chero chinhu chechikamu chekufungisisa chiri.
Kucherekedza pfungwa dzako uchinge wakazviparadzanisa nadzo kunokubatsira kuti usiyane nazvo uye zvidzivise kukutonga nehunhu hwako.
Edza imwe yeakawanda maapplication ehukuru, yemahara sumo yenyika yekufungisisa.
11. Zoni Kunze
Dzimwe nguva iwe unongoda kubvisa pfungwa dzako pazviri. Teerera kune yako yaunofarira podcast, kunamatira mu audiobook, kana tarisa episode yeunofarira akateedzana.
Chero chipi zvacho chingabata pfungwa dzako dzese uye kubvisa pfungwa dzako pazvinhu chinogona kubatsira kugadzirisa pfungwa dzako.
12. Seka Pauri
Kana isu tichiona vamwe vanhu vachishatirwa, tinoona kuti isu pachedu tinogona sei kusava nemusoro kana isu tave kuona zvese kuburikidza neanodziya chifukidziro.
Kana iwe uchikwanisa kutora nhanho kumashure uye uchizviona iwe kuti vamwe vari kukuona sei iwe uri mune ino mamiriro epfungwa, iwe unogona kazhinji kuzvisunungura kubva mairi nekukoshesa kuti iwe unoratidzika kunge wakaita kunge petulant mwana.
Edza kutsvaga iro rinosekesa reyako yako yakashata maitiro uye kuseka nezvazvo. Usatya kutora Mickey kubva mauri ikozvino uye zvakare.
Hapana chimwe chepamusoro chiri rocket sainzi, asi chero chimwe chazvo chingave kiyi yekukuita kuti udzokere pakunzwa zvakanyanya sewe chaiye wega.
Kungoshandura zvakapusa kwepfungwa, zvishoma zvekukanganisa kana zvishoma zverudo, kungave kuzvida-rudo kana rudo kubva kune vakakukomberedza, zvinogona kuve chombo chako chakavanzika chekurambidza kutsamwa.
5 WWE Isita mazai chete ivo vateveri vakaomarara vaikwanisa kuona
Unoziva Sei Kana Iwe Uri Murudo? 10 Zviratidzo Iwe Chaizvoizvo Uri.
5 hombe WWE nyaya dzinodzosera kumashure
Wepamusoro 5 Mukurusa WrestleMania masuo muWWE nhoroondo
4 Nzira dzeWWE dzinogona kutora kumutsidzira kweNo
Aimbova WWE Superstar CM Punk anotora pfuti kuna John Cena
Bianca Belair anoda kutarisana vaviri vakakurumbira veWWE vaviri mune yakasanganiswa tag timu mutambo
10 Yakanakisisa WWE Randy Orton Matches
Charlotte Flair anopindura zvakataurwa naRonda Rousey paWWE
Wepamusoro 5 Jeffree Star Zvizoro
Chii chakakosha mambure aTony Dow? 'Siya Ive Beaver' hupfumi hwenyeredzi hwakaongororwa sezvo ari muchipatara nekuda kwemabayo
Zviratidzo gumi Mumwe Munhu Ane Nyaya Dzokuzvipira (+ Maitiro Ekukunda Izvo)
unounganidza sei hupenyu hwako
kuudza muchivande mumwe munhu kuti unomuda
nzira yekuudza kana mumwe munhu achitamba mitambo yepfungwa
zvakaipa zvinoramba zvichiitika kwandiri ndinotukwa
ndeupi musiyano uripo pakati perudo nekuve murudo
ari kutya manzwiro ake here